Kudzidza Kukwira Mabhasikoro uye Kuvaka Software | Martech Zone
Kudzidza Kukwira Mabhasikoro uye Kuvaka Software
Chipiri, Kurume 27, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Basa rave riri dambudziko chairo munguva pfupi yapfuura. Kuva Chigadzirwa Maneja ibasa rinonakidza - paunosvika pakuita iro basa. Ndoziva icho chinhu chisina basa kutaura asi iwe uri chaizvo musimboti wehukama mukuenderera mberi tug o o hondo neKutengesa, Kubudirira, Vatengi Services uye hutungamiriri mukambani.
Vamwe vanhu vanorasikirwa nesaiti yekuti chinangwa hachisi chekuvaka zvimwe zvinhu kana inotevera inotevera Webhu 2.0 application, chinangwa ndechekupa simba vanhu kuti vaite basa ravo zvinobudirira, uye zvine hungwaru. Mazuva ese ini ndinobvunzwa, "Ndeapi maficha ari mune inotevera kuburitsa?"
Ini kashoma kupindura mubvunzo nekuti tarisiro yangu haisi pazvinhu zvachose, chinangwa changu ndechekuvaka mhinduro inogonesa vashambadziri kuti vaite basa ravo zvinobudirira uye zvakanyanya. Kupa simba vatengi vako ndizvo zvazviri. Kana iwe ukaisa pfungwa pazvinhu zvikuru uye zvinopenya, iwe unenge uine zvinhu zvakakura uye zvinopenya zvisina vatengi vanozvishandisa.
Google yakavaka umambo hunotanga neye imwechete chinyorwa bhokisi. Ndakaverenga zvimwe zvinyorwa uko Yahoo! yakashoropodza Google pakushandisa kwavo. Chii chiri nani usability pane imwechete chinyorwa bhokisi? Usandibata zvisirizvo, Yahoo! inovaka zvimwe zvinonakidza maficha mumaapplication avo. Ini ndinonyatsoda yavo yekushandisa interface zvinhu, ini handingashandise maapplication avo.
Google inodzidzisa vanhu kuchovha bhasikoro, uyezve vanoramba vachivandudza bhasikoro. Nekuvaka tsvakiridzo dzinobudirira kubva mubhokisi rimwe chete, Google yakapa mazana emamiriyoni evanhu kuti vaite mabasa avo zvirinani. Yakashanda, ndosaka munhu wese achiishandisa. Yakanga isina runako, yakanga isina peji inoyevedza, asi yakapa vashandisi vayo kushanda nemazvo uye zvinobudirira.
Unogona here kufungidzira kukuisa iwe wemakore mana pabhasikoro regomo rine gumi neshanu nematanho ekumashure, magirazi, jagi remvura, nezvimwe? Iwe haugone. Saka nei iwe uchida kuvaka software application iyo ine 4-inomhanya, magirazi, masaini uye jug remvura? Iwe haufanire. Chinangwa ndechekuti ivo vadzidze kuchovha bhasikoro kuitira kuti vakwanise kubva paA point kusvika paB. Kana Point A kusvika paPoint B ichikura mukuoma, ndipo paunenge uchida bhasikoro riine hutsva mashandiro arino ritsigira. Asi chete kana mushandisi achigona chaizvo kuitasva!
Izvi zvinoreva kuti kurovedza mavhiri kwakakura (tinoona aya muchimiro chevaroyi). Kamwe mushandisi paanogona kukwira bhasikoro, ipapo unogona kubvisa mavhiri ekudzidzira. Kana mushandisi akakunda pakuchovha bhasikoro uye achida kuchimhanyisa nekukurumidza, wozoisa mamwe magiya pairi. Kana mushandisi achida kumhanya-munzira, vagadzike ne Mountain Bike. Kana mushandisi achizorova traffic, kanda mugirazi. Uye kune iwo marefu kukwira, kukanda muchirongo chemvura.
Google inozviita nekuburitsa kuri kufambira mberi uye nekuvandudzwa kuri kuenderera musoftware yavo. Ini ndinoda chokwadi chekuti vanondisungirira nechimwe chinhu chiri nyore uye voenderera mberi nekuwedzera pazviri. Vakatanga nebhokisi remavara, ndokuzowedzera zvimwe zvinhu sekutsvaga mifananidzo, kutsvaga blog, kutsvaga kodhi, peji reGoogle Home, Google docs, Google Spreadsheets… Sezvo ndanga ndajaira kushandisa software yavo, varamba vachivandudza iyo kutsigira mamwe maitiro anoita kuti ndiite basa rangu zvinobudirira uye zvine hungwaru.
Iyo bhasikoro ndiyo inoita kuti munhu abve panongedzo A kusvika kunongedza B. Vaka bhasikoro hombe riri nyore kukwira, kutanga. Kana vachinge vadzidza kuchovha bhasikoro, wobva washushikana nezvekuti ungatsigira sei mamwe maitiro nekuvaka mashandiro matsva mukushandisa kwako.
Rangarira - Google yakatanga neyakareruka mameseji bhokisi. Ndingakupikise kuti utarise kunyorera kuri kukurumidza kushanda uye nemabhizinesi akabudirira pawebhu uye iwe unowana imwe yakasarudzika hunhu kune ese avo… ari nyore kushandisa.
Anofara 500th Post Kwauri!
Mar 28, 2007 pa 9: 33 AM
Yakanaka post! Kunyanya kuda fananidzo.
Ini ndinofunga kuti ndevapi mamaneja echigadzirwa anonetsa muzuva rino ari kunyatso kutsanangura kuti inguvai chaiyo yekuwedzera iyo "bhasikoro" maficha uye maitiro ekuisa 'em mune izvo zvatove zviripo izvo avo vashandisi vakura kujaira.
Apr 2, 2007 pa 2: 15 PM
Yakakura post Doug. Saka zvinhu zvakawanda zvinoita kunge zvinotonhorera zvinoita kuti basa riwedzere. Wakaona bhuku "Nei Software Sucks" kana "Kurota muKodhi"?
Ivo vaviri vanotaura nezvekuti software inoshatiswa sei nekuyedza kuve inotonhorera kana yakanyanya kuchinjika vs. kungoita kuti basa riitwe zvakapusa.
Apr 2, 2007 pa 3: 34 PM
Ndatenda, Chris! Ndine chikwereti ichi chidzidzo kwauri neimwe nzira. Iwe wakavaka ExactTarget pane chirevo chekuvaka software yevashandisi uye zvakapusa kugadzirisa dambudziko. Ini handigoni kumirira kuti uone zvawakachengetera nekambani yako inotevera, Kuwedzera!